ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ စိတ်ဝင်?? - Yangon Media Group
Cinematheque Program ၏ ကဏ္ဍခွဲတစ်ခုဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း (Film Analysis) ပြုလုပ်ရာတွင် လာရောက် ဆွေးနွေးသူများအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျလာခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အောင်မြင်သည့် အခြေအနေရှိကြောင်း ရုပ်ရှင် မြှင့်တင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ အောင်မင်းက ပြောသည်။
ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ အောင်မင်းက ”ဒီနေ့ကတော့ ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကောင် စရိုက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ ဒါရိုက်တာ ဘာတွေကို ရည်ညွှန်းသလဲ စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူ တွေအနေနဲ့လည်း ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း အားကောင်းလာတယ်။ အပတ်စဉ်ပါဝင် ဆွေးနွေး တဲ့သူတွေလည်း ပုံမှန်လာကြ တယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ လျော့ကျ မသွားပါဘူး။ အခုလို ဆွေးနွေးပွဲဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန ၊ ရုပ်ရှင်မြှင့် တင်ရေးဌာနခွဲ၊ ရုပ်ရှင် အနုပညာရပ်ဝန်း၊ ရုပ်ရှင်ပြခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အပေါ် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း (Film Analysis) ဆဋ္ဌမအကြိမ် သုံးသပ် ဆွေးနွေးမှု အပြီးတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြော ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုပ်ရှင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စင်တာတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစင်တာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှ ရုပ်ရှင်ပညာကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ပြင်ပမှ ရုပ်ရှင်ပညာကိုစိတ်ဝင်စား သည့် လူငယ်များနှင့် ပြင်ပရုပ်ရှင် သင်တန်းများမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်း သူများတက်ရောက်ကြသည်။
လူငယ်ဒါရိုက်တာ လူမော်က ”ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာFilm School တွေက တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မရှိသေး တော့ ဒီလို Film Analysis တွေ လုပ်တာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း တော်တော် စိတ်ဝင် စားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးကြည့်တာနဲ့ ဒေါက်တာအောင်မင်း အချက်ကျကျ ပြောပြတာတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေအတွက် ဇာတ်ညွှန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ပိုပြီးတော့ ပြည့်စုံစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇာတ်လမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြားသော အသိတွေကို လည်း ပိုပြီးသိခွင့်ရပါတယ်။ ဒီအသိ တွေဟာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့အခါ အများ ကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ ပြသဆွေးနွေးသည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် Golden Horse Film Festival and Awards ၌ မင်းသမီး Maggie Cheung သည် အကောင်းဆုံးအမျိုး သမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင်Hong kong Film Critics Society Awards ၌ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုနှင့်Film Of merit ကို လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင်National Society of Film Critics (USA) ၌ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆုအား လည်းကောင်း အသီးသီး ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပွဲများကို လစဉ် ဒုတိယပတ်နှင့် တတိယပတ် တို့၏ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ လာမည့် ဆွေးနွေး ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မှ Art House Film အမျိုးအစား ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများထဲမှ ဇာတ်ကား များကို အလှည့်ကျ ရွေးချယ်ကာ ပြသဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ရန် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို စွပ်စွဲချက်အဖြစ် အမေရိကန်က အသုံးပြုနေကြောင်း ရုရှား ဥ??
တံဆိပ်ခေါင်း ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိလိုသူများ သြဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ သက်ဆိုင်ရာမြ?
နေပြည်တော် ကားပြပွဲတွင် ပြင်သစ်၊ ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကားသစ်များ အနိမ့်ဆုံးဈေ